I-Coil Sheet Factory |Abakhi Beshidi Lekhoyili laseChina, Abahlinzeki
Ukuhlobisa I-Copper Strip
I-Copper ibilokhu isetshenziswa njengezinto zokuhlobisa umlando omude.Ngenxa yezinto ezibonakalayo zine-ductility eguquguqukayo kanye nokumelana nokugqwala okuhle.Iphinde ibe nendawo ecwebezelayo nokwakhiwa okuqinile.Kulula ukufakwa umbala nge-ejenti yamakhemikhali.Isetshenziswe kabanzi ekwenzeni iminyango, amafasitela, izingubo, imihlobiso, uphahla, izindonga nokunye.
Ishidi Lethusi elisekelwe kukhopha ye-electrolytic, i-zinc kanye nezakhi zokulandelela njengempahla yayo eluhlaza, ngokucutshungulwa nge-ingot, ukugoqa okushisayo, ukugoqa okubandayo, ukwelashwa kokushisa, ukuhlanzwa kwendawo, ukusika, ukuqeda, bese kuyapakishwa.Ukusebenza kwezinqubo ze-Material, ipulasitiki, izakhiwo zemishini, ukumelana nokugqwala, ukusebenza kahle kanye nethini elihle.
I-Brass strip esekelwe kukhopha ye-electrolytic, i-zinc kanye ne-trace elements njengempahla yayo eluhlaza, ngokucutshungulwa nge-ingot, ukugoqa okushisayo, ukugoqa okubandayo, ukwelashwa kokushisa, ukuhlanzwa kwendawo, ukusika, ukuqeda, bese kuyapakishwa.
Ukusebenza kwezinqubo ze-Material, ipulasitiki, izakhiwo zemishini, ukumelana nokugqwala, ukusebenza kahle kanye nethini elihle.
Isetshenziswe kabanzi kugesi, izimoto, ukuxhumana, ihadiwe, umhlobiso nezinye izimboni.
I-bronze strip iyithusi elinethayela, i-aluminium, nezinto zokulandela umkhondo njengezinto zokusetshenziswa, ngokucutshungulwa ngama-ingots, ukugoqwa okushisayo, ukugoqwa okubandayo, ukwelashwa kokushisa, ukuhlanza indawo engaphezulu, ukusika, ukuqeda nokupakisha, izinto ezinamandla okukhiqiza okuphezulu, amandla okukhathala, izakhiwo ezinwebekayo. kanye nokwakheka okuhle kokugoba.
I-Copper Sheet yenziwe ngethusi le-electrolytic, ngokucutshungulwa nge-ingot, ukugoqa okushisayo, ukugoqa okubandayo, ukwelashwa kokushisa, ukuhlanzwa kwendawo, ukusika, ukuqeda, bese ukupakisha.
Umcu Wethusi Wohlaka Lokuhola
Impahla yefreyimu yomthofu ihlale yenziwa ngengxubevange yethusi, i-Iron ne-phosphorus, noma ithusi, i-nickel ne-silicon, enengxubevange evamile No. kanye ne-KFC bamele kakhulu ithusi, insimbi ne-phosphorus alloy, yizinto ezivame kakhulu ze-alloy.